एमाले महाधिवेशन :चुनाव भएमा हार्छु भनेर पहिल्यै कसरी कन्फर्म भए योगेश भट्टराई ? – GALAXY
एमाले महाधिवेशन :चुनाव भएमा हार्छु भनेर पहिल्यै कसरी कन्फर्म भए योगेश भट्टराई ?
केहि नामहरुलाई भने एमाले कार्यकर्ता र राजनितीमा चासो राख्ने एउटा तप्काले नजिकबाट नियालीरहेको छ । एमालेको आसन्न दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन बाट यी मान्छेहरुको अवस्था के होला भनेर चासो राखिएको «नाम मध्यको एक नाम हो योगेश भट्टराई ।
काठमाडौँमा भएको एमालेको नवौँ महाधिवेशन बाट भट्टराई माधव कुमार नेपाल प्यानल बाट सचिवमा निर्वाचित भएका थिए । दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्म आइपुग्दा एमालेको आन्तरिक राजनितीक जीवनमा निकै उताडचढाव आएको छ । त्यस बखत अध्यक्षमा प्रतिष्पर्धा गरेका माधव नेपाललेनै अहिले एमाले विभाजन गराएर नेकपा एसको अध्यक्ष बनेका छन् ।
पछि एक कार्यक्रममा ओलीले भट्टराईलाई सार्वजनिक रुपमै वैगुनी केटो भनेर भनेका थिए । वैगुनी केटो अहिले पनि उनको उपनाम जस्तै बन्न पुगेका छ । रिस उठ्ने वित्तिकै हर कोहीले उनलाई सोही नामले गाली गर्ने ट्रेन्डनै चलेको देखिन्छ । माधव नेपाल प्रचण्ड तिर लागेर त्यस बखत ओली विरुद्ध चर्को भाषण गरेर हिँडेका उनी माधव नेपालले पार्टी विभाजन गर्दा भने नेकपा एस तिर लागेनन् ,एमालेमै रहे ।
आफैँले सांसद जिताएर ल्याएर मन्त्री बनाएको मान्छे अप्ठेरो बेलामा धोका दिएर गएकाले उ बेला ओलीले बैगुनी केटो नाम राखेका थिए यस पटक सबै वैगनु माफ गरेर फेरी गुन गर्न ओली तयार होलान् की नहोलान् भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । भट्टराईले यस पटक पनि आफु सचिव पदको आकांक्षी रहेको बताएका छन् तर ओलीले कुनै सिग्नल दिएका छैनन् ।
सर्वसम्मत नेतृत्व चयन नभएमा भने योगशले निर्वाचनमा नमिठो पराजय बेहोर्नु पर्ने चर्चा राजनितिक बजारमा चलेको छ । चुनाव भएमा हारिन्छ भनेर उनी आफैँ पनि कन्फर्म भएको पाइएको छ । यो एमाले फुटाउँने मान्छे हो, माधव नेपालको मान्छे हो भनेर प्रतिनिधीहरुले भोट नदिने र आफुले चुनाव हार्ने भनेर उनी आफैँले बोेलेको अडियो रेकर्ड ओटीभी नेपाल डक कम सँग सुरक्षित रहेको छ ।